एक्सनमा उत्रिए मेयर शाक्य : खुल्लामञ्च कब्जा गरेकाहरुलाई धपाएरै छाडे ! - Daily Gorkhali
मुख्य पृष्ठ /समाचार/एक्सनमा उत्रिए मेयर शाक्य : खुल्लामञ्च कब्जा गरेकाहरुलाई धपाएरै छाडे !
पछिल्ला केही दिनहरुमा सरकारी जग्गामा व्यक्तिको नियन्त्रण लिएको कुरा चर्चामा रहेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार देखि सुरु भएको यो विषय अहिले काठमाडौं खुल्लामञ्चसम्म आइपुगेको छ । यो बिचमा महानगरपालिकाले शनिबार दिउँसोदेखि खुलामञ्चमा डोजर लगाएर टहर भत्काएको छ ।
खुलामञ्चभित्र बनाइएका सटर लगायतका संरचनाहरु डोजरले भत्काउन थालेपछि त्यहाँ रहेका पसलेहरुमा भागाभाग र रुवाबासी मच्चिएको छ । खुलामञ्च अतिक्रमण गरेर सटर बनाइएको भन्दै जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले शनिबार ती पसलमा डोजर लगाएको हो ।
काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले केही दिन पहिले मात्रै खुल्लामञ्चमा डोजर लगाउने बताउनु भएको थियो । महानगरपालिका र ठेकेदार मनोजकुमार भेटवालको स्वच्छन्द विल्डर्सको मिलेमतोमा खुल्लामञ्च ठेक्का दिएको खुलासा भएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
भिडियोमा हेर्नुहोस यसरी डोजर चल्यो खुलामञ्चमा
खुलामञ्चमा डोजर चल्यो ! पसलेको भागाभाग
खुलामञ्चमा डोजर चल्यो ! पसलेको भागाभागhttps://www.onlinekhabar.com/2019/04/761447
Gepostet von OnlineKhabar am Samstag, 27. April 2019
काठमाडौँ महानगरकी उपमेयर खड्गीलाई व्यापारीले खुलामञ्चबाट लखेटे
काठमाडौँ, १४ बैशाख । शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा बनाइएका अवैध संरचना भत्काएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताविपरित सटर निर्माण गरेर व्यापारीहरुलाई भाडा दिएको सार्वजनिक भएपछि महानगर र सरकारको आलोचना भएको थियो ।
जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भएपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्य एक्सनमा उत्रिएका हुन् । उनले यसको संकेत शुक्रबार नै गरेका थिए । र, उनी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीप्रति रुष्ट पनि थिए ।
मेयर शाक्यले उपमेयर खड्गीलाई अनुगमनको जिम्मा दिएको तर, प्रतिवेदन नबुझाएको आरोप लगाएका थिए ।
शनिबार भने उपमेयर खड्गी संरचना भत्काइरहँदा खुलामञ्च पुगिन् । त्यसअघि पुगेका मेयर शाक्य कार्यक्रममा जान भन्दै निस्किसकेका थिए । उनलाई व्यापारीहरुले अवरोध वा विरोध केही गरेका थिएनन् ।
तर, जब उपमेयर हड्गी पुगिन् आक्रोशित व्यापारीरुले उनलाई लखेटे । उनले आइतबार यस विषयमा बैठक बोलाएको र जसरी पनि खुलामञ्च खाली गर्ने तयारीमा रहेको सञ्चारकर्मीलाई बताइन् । तर, शनिबारै डोजर लगाएर ‘जे भयो, राम्रै भयो’ भनेर प्रतिक्रिया दिइन् ।
उनले मिडियालाई प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा पुगेका व्यापारीहरुले खड्गीलाई घेरेका थिए । आक्रोशित व्यापारीहरुले खड्गीमाथि हतापातको प्रयास समेत गरेका थिए । त्यसपछि, प्रहरीले उपमेयर खड्गीलाई भीडबाट बाहिर निकालेको थियो ।
दक्षिण कोरियामा कार्यरत तेह्रथुमका रोशन कन्दङ्वाको निधन ,,,,,,,,,,,,,,RiP लेख्नुहोस् मृत्य आत्यमाले शान्ति पाउनेछ)
आमा धेरै धन कमाएर हजुरलाई सुख संग राखछु भन्दै दक्षिण कोरिया गएका तेह्रथुमका रोशन कन्दङ्वा रातो बक्समा फर्किएपछि,,,
हिउँदे झरी लम्बिने संकेत, यस्ताे छ अागामी ३ दिनकाे माैसम पूर्वानुमान
एसईई परिक्षा दिएर नदीमा पौडी खेल्न गएका युवा त्रिशुली नदिमा बेपत्त,,,,,